Abbootiin Irree Odoo Dhaadatanuu Hallayyaa Bu’u ! - Welcome to bilisummaa
Wayyaaneen har’a qawween harkaa qaba jettee ummata Oromootti dhaadachaa fi
roorrisaa jirtus kan ishii eeggatu kanuma. Akka rorriftetti hin haftu. Qawwee harkaa qabna, carraa arganneerra jedhanii ummata sivilii irratti roorrisuun, dhaadachuun yoo gaafii mirgaa kaase ajjeesuun, saamuun yakka, sammuu dhabuudhasii. Beekaan gaafii ummataaf gurra laata, dhaggeeffatee deebii barbaachisaa ta’e kenna. Kan akka
wayyaanee garuu gaafii sirrii fi mirga uumamaa ta’e kan ummattoonni biyyattii keessumaa Ummanni Oromoo kaasaa turee fi jiruuf deebiin ishiin waggoottan 26n darbaniif keessumaa ammoo waggoota 2 as deebisaa turte waraana amma funyaanitti hidhate bobbaaftee kaa’imman Oromoo rasaasaan harcaasuudha. Guurtee mana hidhaatti darbuudha. Biyyaa godaansisuudha.
Ummanni gaafa achii dallanee ka’e, qabuuf nama rakkisa. Balaan dhufus salphaa ta’uu baachuu mala. Wayyaaneen har’a yeroon naaf tole jettee ummata Oromoo fi saboota biroo ajjeesaa, hidhaa fi saamaa jirtus boru bakka seentu akka dhabdu ifaa dha. dhiiga dhanagalaaftee fi qabeenya saamteef numa itti gaafatamti. Ammalleen gatii kaffalaa
Yoo midiyyaarraa bookkistu, dhaadattu jabaa of fakkeessuuf haa yaaltu, haa hololtu, jabaan ana caalu hin jiru jettee yaa odeessitu malee keessi ishii oneera, sodaan , dhiphuun gutamtee jiraachaa jirti. Dhugana lafarra jirus kanuma mirkaneessa.
Previous Baasa baranaa: “Qubeen afaan Oromoo Lrraa eeguu qabdi jedhu”
Next Xumura hoggonoota OPDO